Miyuu Jurgen Klopp Qaatay Talooyinkii Loogu Sheegay Inuu Lacag Badan Suuqa Galiyo Si Uu Man City Uga Qaado Horyaaalka? Waraysi Uu Xalay Bixiyay Oo Caddeeyay Waxkasta. - Gool24.Net
Miyuu Jurgen Klopp Qaatay Talooyinkii Loogu Sheegay Inuu Lacag Badan Suuqa Galiyo Si Uu Man City Uga Qaado Horyaaalka? Waraysi Uu Xalay Bixiyay Oo Caddeeyay Waxkasta.
Liverpool iyo Jurgen Klopp ayaa xalay bilawday kulamadooda saaxiibtinimo ee ka horreeya xilli ciyaareedka waxaana ay nus darsin goolal ah oo bilaa jawaab ah kaga soo adkaadeen kooxda Tranmere Rovers.
Kulankaas ayaa ahaa mid uu Jurgen fursad ku siiyay ciyaartoy badan oo aan wakhti badan helin xilli ciyaareedkii hore waxaana kamid ahaa da’yarka Brewster oo laba gool dhaliyay iyo Nathaniel Clyne oo qudhiisu shabaqa gaadhay.
Kulanka kaddib tababaraha ree Germany ayaa ka faalooday qoddob muhiim ah kaas oo ah haddii ay kooxdiisu markale lacago waali ah la gali doonto suuqa xagaagan oo uu samaynayo saxeexyo badan oo waaweyn.
Klopp ayaa markale ku adkaystay inuusan xagaagani mid mashquul badan u ahaan doonin kooxdiisa isaga oo xusay xiddigo dhawr ah oo kooxdiisa uga dhigaan doona saxeexyo cusub.
“Xilli horeba waanu soo iibsanay (Ciyaartoy), Kaliya idinka ayaan aqoonsanayn” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Klopp oo saxaafada wajahay kaddib kulankaas.
“Rhian Brewster, [Alex] Oxlade-Chamberlain oo aan ciyaarin sanadkii hore iyo dhammaan wiilasha yar yar dhammaantood ciyaartoy cusub ayay noo yihiin anaga”
“Suuqa kala iibsigu waxa uu furan yahay ilaa 8-da August, Dhammaan horyaalada Yurub ayaa qabay aragtida ah in suuqa kala iibsiga la xidho wakhti hore dalka kaliya ee sidaas sameeyayna waxa uu ahaa England sidaa darteed anaga wuxuu naga xidhmayaa saddex toddobaad kahor kuwa kale”.
Liverpool ayaa sanadkii hore ee 2018 si weyn lacago ula gashay suuqa kala iibsiga waxaana xiddigaha ay keentay kamid ahaa goolhaye Alisson Becker, Fabinho iyo Virgil Van Dijk oo dhammaantood door muhiim ah ka qaatay ku guuleysigii Champions League.